> Resource > Utility > Maxaa la Sameeyaa Marka Windows Vista fariisiyo Up
Vista fariisiyo ilaa waqtiga oo dhan, caawin!
Mar kasta oo aan computer waxaan bilaabi waxaa laga fariisiyo. Waxa ay maamushaa ganaax 30 ilbiriqsi ka dibna waxa kaliya laga fariisiyo oo waxaan u leeyihiin in ay gacanta ay dami. Waxaan leeyahay vista ku qor Toshiba ah. Wax la mid ah in hab ammaan Waxa ay. waxa kaliya ee aan heli karo waa bedeley aad ka heli kartaa in aan F2 garaacid iyo F12, waa ay jiraan wax ku bedeley kuwa (Calan-Up iyo Maareeyaha Boot ... Waxaan qabaa) in hagaajin karaa dhibaato. Fadlan caawi, iyocadhadii isticmaalo computer at dhan !! Thanks!
Marka Vista fariisiyo, sababta waxay noqon kartaa mid badan, iyo xal u noqon karaa sidoo kale dad badan. Vista la Xayiraadda kartaa xawaaladaha, inta lagu guda jiro fankooda internet ama fariisiyo aan kala sooc lahayn ama si joogta ah. Waxaa fure u ah sida loo helo xal dhameystiran oo wada wax ka qaban karta. Waxaa jira utilities badan oo shaqo u samayn karaa, laakiin wax badan oo aad u baahan tahay in ay sii socda nidaamka marka aad isticmaasho. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay in la helo qalab ka caawin kara in ay si habsami leh your computer, halka hagaajin aad dhibaato la xanibay Vista.
3 talaabooyin lagu xalinayo Negeria Windows Vista
Marka hore, waxaad heli kartaa aan talo barnaamijka in aad u baahan tahay: Wondershare LiveBoot Boot CD / USB , kaas oo kaa caawin kara in uu ordo habka Vista qaboojiyay si habsami leh, iyo sidoo kale hagaajin Vista ee talaagada arrinta in dhowr daqiiqo.
Step1. Samee CD ah Downlaods ama USB drive 1 click
Orod barnaamijka on your computer ka dib markii duuban oo ku rakibidda. Markaas ah saaxir-interface soo socda la soo bandhigi doonaa. Diyaari CD maran ama USB drive galay computer iyo dooran hage saxda ah ee aad naftaada u tahay inay Downlaods CD / USB. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad perfrom click ku badhanka gubanaya bartamaha iyo bidix ayaa la sameyn doonaa si toos ah by barnaamijka.
Step2. Kabaha aad xayiray Windows Vista si nabad ah oo si habsami leh
Ka dib markii ay helayso Downlaods CD / USB drive, waxa furaysto galay kombiyuutarka aad Vista oo guuleysatey. Marka nidaamka uu bilaabo inuu ku shuban, si deg deg ah wax miiran F12 si ay u tagaan Menu Device Boot ah. Markaas dooro "suuro ama USB CD-ROM Drive", oo waxaad heli doontaa menu boot a soo socda. Guji "Boot ka LiveBoot" si aad u hesho aad xayiray Vista.
Step3. U dayactir aad Windows Vista fariisiyo arrinta
Si aad u Vista si guul ah, waxaad u baahan tahay in ay ku qaataan dhowr daqiiqo sug loading Windows ah. Marka aad hesho u galay, waxaad heli doontaa Wondershare LiveBoot socda on your computer. Tag ah "Windows Recovery" oo guji "Loading Xalka Shil", waxaad heli doontaa interface hoose. Halkan waxaad ka heli kartaa xal dhamaystiran si aad u Vista fariisiyo dhibaato. Raac hababka hoos ku qoran oo ay qaadaan talaabooyin ay hoos u hesho arrimaha aad.
Sida loo dayactir Ntldr Error Tifaftirayaasha
Sida loo dayactir Khaladaadka Shlwapi.dll on Your PC
Sida loo dib Internet Explorer 9/8/7